MANDAROOTA FI MAGAALAAWWAN OROMIYAA – OROMIAN TOWNS AND CITIES: Kutaa Shanaffaa -
Erga mandara Tokkee Kutaayyee kana bultanii hamma tokko haara-baafattanii, mee amma wanneen karaaf nu barbaachisan mara fudhannee gara magaalaa Geedoo-tti haa qajeellu! Otoo mandarattii bicuu takka tan mandara tahuuf curruuqaa (daa’imaa) jirtuu, tan Baabbicha (20) jedhamtuu fi tan lagattii Baabbicha jedhamtu irratti hundeeffamtee geenya. Lagattii tanatu naannoo biyya Torban Kuttaayee jedhamuu fi naannoo Calliyaa addaan-baasa. Maqaan Calliya jedhamu kunis akkuma maqaa Kuttaayeejedhamuu maqaa damee-gosa Oromoo tahuu isaa hubachuun, seenaa uummataa fi saba Oromoo keessatti mee galmeeffaddhaa! Kuunnoo, argitu magaalaa Geedoo seenuuf jirraa!
Geedoon (21) mandaroota fi magaalaawwan Oromiyaa kanneen gooroo, tulluu fi lafa-oljedhaa irratti hundeeffaman kanneen akka: Haroo Hara Liiban (Haroo Wancii), Gimbii, Gorii, Dambi Doolloo, Goree, Ejeree, Koloboo, Sululta, Caancoo, Shano, Dasee, Asallaa, Gobba, Diinsho, Diillaa, Calanqoo, Qullubbii, Ejersa Gooroo faa keessatti argama. Silaa jechi “geedoo” jedhamu kun maal jechuu akka tahe beektuu? Namaafis tahee, lafaaf maqaa baasuu irratti eenyutu Oromoo keenyaan morkuu dandaya? Akkuma lafa mukni mi’eessaa jedhamu itti-heddummatuun “Mi’eesso“, lafa adaamiin itti-heddummaatuun “Adaamaa“, lafa dasaan (handaqii, baaxiyyaa) itti-heddummaatuun “Dasee“, lafa bishaan itti-heddummaatuun “Bishooftuu“, lafa diilalli (qorri) itti-hammaatuun “Diilallaa (Diilallaa’aa) jedhee baase sana, lafa geedni itti-baay’atuun immoo “Geedoo” jedhee moggaase. “Geeda” jechuun Afaan Oromoo isa bara durii duriitiin “muka dhaabatu, jechuun kan hin muramin isa warri Ingilizii tree” jedhaniin sana. Kunoo, amma mukti Oromoo bardhibbee hedduu qaxxaamuree, bara nafxanyootaa dhaqqabe sun ciramee, akkuma argaa jirtan baargamoo tokko tokko callaatu jira.
Egaa, mee amma konkolee keessaa gadi-bayaatii Geedoo fi naannoo isaa dawwaddhaa! Karaan inni gara kaaba-lixaatiin jiru kun, isa magaalaa Ficaawaa (Fincaa’aa) keessa bawuun gara Shaambuu nama geessu. Lagni Fincaawaa kun jalliyaan (itti-yaatuu) laga Abbayyaa ti. Mootummaan Habashaa laga kana irraa korneettiin inni hoomishatu: Goojjamii fi Gondoriif erga ibsaa kennee booda naannoo Tigraay dhaqqaaba. Geedoo irraa kaatanii Shaambuu gawuuf, naannoo gosoolii Oromoo afurii keessa baatu:Calliya, Jimma Raaree, Guduru-u fi Horro. Kuunnoo, tulluun karaa fuula kaabatiin isinitti muldhatu sun Tulluu Maraa (M 3146) jedhama. Warri nafxanyaa isuma kanallee nuuf dhiisuu diduun “Tulluu Amaaraa” jedhuuni. Waan huurriin tulluu kanatti marsee maramee muldhatuuf Oromoon maqaa bareedaa kana baseefi. Geedoon biyya baddaa waan taheef, akkuma naannoo Meettaa Hoolotaa faa farsoon isaa shaggaa dhaa, shaggoomsatii dhugaa! Daadhiin Geedoos hedduu bayeessaa feenan eeyyee isas! Biyyi Oromoo inni Calliyaa kun waan ittiin geerrarsa Oromootiin faarfamu qabaa, mee kanaa gadittan isiif dhiyeessa. Geerrarsi kun naannoo Daannoo irraa jalqabuun naannolee Macca Bahaa fi Tuulamaa tokko tokkoon wanneen isaan qabaniin faarsaa naannoo Oromoo Jiddaa dhaqqaba.
Erga waa bayyanannee amma gara Baakootti qajeella. Geedoo irraa kaanee, magaalaa Ijaajjii (22)Shoboka (23) fi Tibbee (24) keessa baanee, magaalaa Bakkoo (25) dhaqqabna. Kunoo, erga magaalaa Ijaajjii geenye mee geeda Odaa isa magaalaa walakkaatti argamuu kana sirriitti doowwaddhaa! Asii irraa gara fuula Jimma Abbaa Jifaar-itti yoo deemtan Odaa Bisil seena-qabeessicha sana argitu. Erga Tuulamnii fi Macci wiirtuu yaa’ii isaanii Odaa Nabee irraa addaan bahanii, Macci as dhufuun yaa’ii ofii hundeeffate. Booda immoo erga gosolii Maccaa keessaa kaan gada-gattee tahuun bulchiinsa mootiitti amanu bu’ureeffatee, kaan immoo yaa’ii gosa-gosaatti garagale. Sirna Gadaa irraa gara sirna mootiitti cewuun kun akka barreessitoonni Habashaa fi Oromoonni tokko tokko jedhanitti qaroomina gara fuulduraatti tarkaanfatu otoo hin taane, gara gadaantummaa isa ilmoon namaa ilmoo namtiin bitamootti cewuu-dha ture.
Tags afaan Biyya Oromiyaa
Previous Kanaan dura finfinneen lammi ishi dhiifte alagaa sooraa turte….
Next Beekan Guluma Erena Short biography